Hatanjahana ny fanahy malemy
"Ary amin 'izany, ry rahalahy, dia mpitrosa isika - tsy amin'ny nofo anefa, ka velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo hianareo, dia tsy maintsy maty; fa raha ny Fanahy no amonoanareo ny asan'ny tena, dia ho velona hianareo" — Rom. 8:12,13.
Tsy voafetra ho an'ny fotoan'andro iray na ho an'ny antokom-pirazanana iray ny teny fikasana momba ny Fanahy Masina. Nambaran'i Kristy fa hiaraka amin'ny mpanaraka Azy hatramin'ny farany ny herin'Andriamanitra miasa mangina avy amin'ny Fanahiny. Hatramin'ny andron'ny Pentekosta ka hatramin'izao fotoana izao, dia nalefa ny Mpananatra ho an'izay rehetra nampilefitra feno ny tenany tamin'ny Tompo sy ho amin'ny fanompoana Azy. Tonga tamin'izay rehetra nanaiky an'i Kristy ho Mpamonjin'ny tenany manokana ny Fanahy Masina ho Mpananatra, mpanamasina, mpitarika ary vavolombelona. Arakaraka ny maha-etiety kokoa ny niarahan'ny mpino tamin'Andriamanitra, dia arakaraka izany koa no nampahazava kokoa sy nampahery kokoa ny teny vavolombelona nataony ny amin'ny fitiavan'ny Mpanavotra sy ny fahasoavany mamonjy. Ny lehilahy sy ny vehivavy izay nandray tombontsoa betsaka tamin'ny fanatrehan'ny Fanahy Masina nandritra ireo taonjato lava nisian'ny fanenjehana sy ny fizahan-toetra, dia toy ny famantarana sy fahagagana teo amin'izao tontolo izao. Teo anatrehan'ny anjely sy ny olona no nanehoany ny hery manovan'ny fitiavana manavotra.
Izay voahosotry ny hery avy any ambony tamin'ny Pentekosta dia tsy hoe afaka tamin'ny fakam-panahy sy ny fitsapana noho izany akory. Raha nijoro ho vavolombelon'ny marina sy ny fahamarinana rehetra izy, dia notafihin'ny fahavalon'ny fahamarinana izay nitady ny handroba ny fanandramana kristianina tao aminy. Voatery niezaka tamin'ny hery rehetra nomen'Andriamanitra azy izy hanatratra ny ohatry ny fahafenoan'ny lehilahy sy vehivavy ao amin'i Kristy Jesôsy. Nivavaka isan'andro izy nangataka fanampim-pahasoavana, mba hahazoany miakatra ambony kokoa hanatona hatrany ny fahatanterahana. Na dia osa indrindra aza izy, teo ambanin'ny herin'ny Fanahy Masina, dia nampiasa ny finoany an'Andriamanitra, ka nianatra ny hanatsara ny hery nankinina taminy sy hanjary nohamasinina, nohatsaraina ary nasandratra. Rehefa nilefitra tamim-panetren-tena teo amin'ny herin'ny Fanahy Masina miasa mangina izy, dia nandray ny fahafenoan'Andriamanitra Ray sy novolavolaina hampitoviana Aminy. — VM, tt. 44,45.